Ny mahasamihafa ny piano nomerika sy ny fomban-drazana
Raha ampitahaina amin'ny piano nentim-paharazana, ny piano niomerika dia tsy manahirana firy, ny sisa ataonao dia ny miditra; hamonjy anao amin'ny fametahana piano. Ary ny maodely azo isa amin'ny piano nomerika dia azo entina amin'ny fotoana rehetra. Izany dia mety indrindra ho an'ny tanora tia piano, saingy mila mihetsika matetika, na ...
“Na dia nateraky ny valan'aretina aza ny fanafoanana ny baiko sasany tany ivelany, tsy nanantena ny hahazo baiko be dia be aho tamin'ny fianteherana tamin'ny fandefasana mivantana androany. Tena lozam-pifamoivoizana tena tsara! ” Ny tolakandron'ny 30 Mey, Zhu Li, filohan'ny Plume Piano Manufacturing (Wuhan) Co., Ltd., ...
Ny rehetra momba ny piano nomerika
Ny tombony azo avy amin'ny piano elektrika: 1, raha ampitahaina amin'ny piano akustika mahazatra dia mora vidy ny piano nomerika. 2, ny piano nomerika dia tsy mitana toerana be. 3, Tena mora nifindrafindra. 4, tsara foana ny feo. 5, vidin'ny fikolokoloana ambany. 6, Afaka mampiasa headphone ianao fa tsy manelingelina ny mpiara-monina aminao ...
Electric Grand Piano, Piano nomerika lafo vidy, Piano mandeha amin'ny herinaratra, Fanamboarana Piano Digital, Kitendry Piano Smart, Piano Digital Upright,